किन दुई दिन मनाइन्छ होली ? • Nepal's Trusted Digital Newspaperकिन दुई दिन मनाइन्छ होली ? • Nepal's Trusted Digital Newspaper
किन दुई दिन मनाइन्छ होली ?
आज देशको पहाडी भेगमा धुमधामका साथ होली मनाइँदै छ । फागुन शुक्ल पक्षको पूर्णिमा तिथिका दिन होलिका दहन गरेसँगै होली मनाउने गरिन्छ । तर तराई भेगमा भने पूर्णिमाको दिन होलिका दहन गरेपनि भोलिपल्ट प्रतिपदाको दिन होली मनाउने चलन छ ।
अर्कोतर्फ वैदिक कालमा समेत यो पर्व मनाउने गरेको साहित्यिक प्रमाण पाइन्छ । सो समयमा यस चाडलाई ‘नवनेष्टी’ भनिन्थ्यो । यसदिन खेतको आधा पाकेको अन्नलाई हवन गरेर प्रसादको रूपमा वितरण गर्ने चलन छ । यस्तो अन्नलाई ‘होला’ भनिन्छ, त्यसैले यसलाई होलिका उत्सवको रूपमा मनाइन्थ्यो ।
त्रिविको नेपाली इतिहास संस्कृति तथा पुरातत्व केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख प्रा।डा। मदनकुमार रिमाल पहाड र तराईमा २ दिन होली मनाउनुको विशेष महत्व रहेको बताउँछन् । मिथिला संस्कृतिमा हुर्किएका रिमाल मिथिला क्षेत्रमा फागु पूर्णिमाको दिन विशेष मेला लाग्ने र हजारौं जनाको उपस्थिति हुने भएकोले सोको भोलिपल्ट होली मनाउने गरिएको बताउँछन् । मिथिला संस्कृतिमा हरेक पूर्णिमाको दिन जनकपुर लगायत देवालयमा विशेष मेला लाग्ने गर्छ ।
रिमालका अनुसार पहाडमा फागुपूर्णिमा र तराईमा होली फरक दिन मनाउनुको २ वटा कारण छन् । एउटा त जात्राका कारण भोलिपल्ट मनाउने चलन बसेको हुन सक्छ । अर्कोतर्फ अघिल्लो दिन साँझ होलिका दहन गरिसकेपछि त्यसको भोलिपल्ट त्यसैको खुसीयालीमा होली पर्व मनाउने गरिएको हुन सक्छ । साँझमा रंग लगाउनुभन्दा पनि भोलिपल्ट मनाउने चलन बसेको हुन सक्ने उनी बताउँछन् ।
‘होली परिवार र साथीभाइकाबीचमा सद्भाव बाँड्ने पर्व हो । पूर्णिमाको दिन जात्राका कारण मनाउन नसकेको रंगीन पर्वलाई भोलिपल्ट साथीभाइसँग बसेर मनाउन थालियो । यसरी नै तराईमा भोलिपल्ट मनाउने संस्कृति बन्यो ।’ रिमालले भने ‘यो हामीले थाहा पाउँदादेखि नै २ दिन मनाउने चलन थियो । पछि यही आधारमा सरकारले बिदा समेत २ दिन दिन थालेपछि झनै यो २ दिने पर्वको रूपमा विकास भयो ।’